Soo dejisan Ableton Live 9.7 – Vessoft
Soo dejisan Ableton Live
Ableton Live – software u gaar ah si ay u abuuraan music elektaroonik ah. Ableton Live waa weyn ee DJ iyo shaqada studio si ay u abuuraan music in waqtiga dhabta ah. Software wuxuu ka kooban yahay dhowr ah qalab waxtar leh si ay u abuuraan walxuhu muusikada, sida synthesizer ah, sampler, mashiinka durbaan, fuusto loomana baahno iwm Live Ableton technology taageertaa hada, Core Audio, VST, Units Audio, Rewire, iyo sidoo kale qaar ka mid ah waxay leedahay qalab gaar ah iyo set lagama maarmaanka ah ee saamaynta maqal ah. Software waxaa ka mid ah baytariyada ku siin macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sidiisa, faah faahsan u sharax isbedel ee signalada iyo talooyin kugu caawiya in la gaaro natiijada ugu wanaagsan.
Set badan oo alaabtii muusikada
Joogitaanka codadka kala duwan
Dhisay-in audio iyo saamaynta MIDI Kale
Abuuritaanka of kuwan raadkaygay in waqtiga dhabta ah
Ableton Live Software la xiriira: